Soo-saaraha heerkulbeegga warshadaha Shiinaha - Soo-qaadista Heerkulbeegga Warshadaha Tayada - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka > Heerkulbeegga warshadaha
Heerkulbeegga bimetal wuxuu ku habboon yahay cabbirka heerkulka dhexdhexaadka ah iyo xaaladaha heerkulka hooseeya, waxaana loo isticmaali karaa in si toos ah loogu cabbiro heerkulka gaaska, dareeraha iyo uumiga. Waxaa badanaa loo qaybiyaa saddex nooc: nooca axial, nooca radial iyo nooca guud.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Heerkulbeegga warshadaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Heerkulbeegga warshadaha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.